Isbaaradu Waa Cadawga Qaranimada iyo Umadda. - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA Isbaaradu Waa Cadawga Qaranimada iyo Umadda.
Isbaaradu Waa Cadawga Qaranimada iyo Umadda.
jidgooyo lagu qaadanayo lacag iyo Burcadda habeenkii dadka baarata kana qaata waxa ay sitaan iwm, ayaa la yiraahdaa Isbaaro, wallow ay hadda soo baxeen kuwa wax ku isbaareysta qalinka iyo awoodda, sideedaba jidgooyadu waa dhib iyo kadeed aan loo adkaysan karin mar haddii aan Amaanka guud wax looga qabanaynin.
intii ka dambaysay dawladdii dhexe ee Milatariga waxaa dalka ku soo kordhay isbaarada iyo jidgooyooyinka loo dhigto gadiidka isaga kala goosha gobollada dalka iyo dadka gaadiidkaas ku safra.
qaar ka mid ah isbaarooyinkaas waxaa lagu dhici jiray amaba lagu dili jiray dadka Musaafuriinta ah haddii ay milkiilayaasha gaadiidka ay ka horyimaadaan amaba ay diidaan wixii lacag ah oo la waydiiyo.
Dad-dadnimada qiimeeya, Ciidamada dalka iyo kuwa waxgarad ah ayaa goobo badan oo dalka ka mid ah isku dayey in ay joojiyaan gardarada kuwa jidgooyada dhigta ee dadka iyo duunyada ay wataan mar kasta dhaca, hase ahaatee, inkasta oo ay dadaaleen haddana dadkaas way u caal-waayeen in ay wax ka qabtaan Tuugtaas dadka iyo dalkaba dullaystay.
qaar badan oo dadkaasi is-xilqaamayna waxay ku waayeen noloshooda qaaliga ah, ka dib markii ay u tashadeen kuwa is-baarada dhigta, si ay isaga hor leexiyaan kuwaan ka hor yimid danahooda is-baarada ay ku helaan.
Is-baaro waa Iimaan La’aan Mutaxan iyo Alle aqoon la’aan, dadka ilbaxayna kuma habboona in ay ku noolaadaan xoolo laga tacbay is-baaro iyo jidgooyo.
waayo hore oo la soo maray dadka Soomaaliyeed ee socodka iyo safarkaba wax ku raadsada waxay ku dhib qabeen jidgooyooyinka yaala goob kasta iyo waddo walba ee la isaga kala goosho.
ugu dambayn maanta ayay dhalatay dawladdii xalaasha ahayd ee garanaysay waxyeellada is-baarada ay leedahay, isla markaana si wayn uga fekeraysa waxyeellada Umadda.
Sidaas darteed, tallaabooyinkii ugu horeeyey ee ay qaaday dawladdaan abaalka wayna looga haayo waa la dagaalanka Argagixisada, Burcadda, Is-baarada qalinka iyo midda tooska ah iyo weliba soo afjaridda musuqa ee dalkan ka jirtay, waxayna qaaday in ka badan 30 is-baaro oo ka jirtay koonfurta Soomaaliya una badnaa gobolka Shabeellada hoose, waxayna xabsiyada dhigtay kumanaan isugu jira burcaddaas qowleysatada ah ee aan u naxeyn dad iyo duunyaba.
waxaa hubanti ah in laga raysan doono is-baaro iyo ku noolaanshaheeda oo aan u wanaagsanayn Umad muslim ah, sideena oo kale, waxaa kaloo ay shacbiga ogaadeen in isbaaro ay tahay cadawga Qaranimada Umadda Soomaaliyeed, waxayna dhaar ku mareen iyaga oo kaashan doona ciidankooda qalabka sida aysan mar kale ka yeeli doonin dhigasho is-baar dambe kuwa ka nolol bartay ee ilaaheey iimaanka ka qaaday.
haatan waxaa ka muuqda goobihii ay ooli jireen jidgooyooyinka maris wanaagsan iyo is-baaro la’aan, waana la arkay waxyeellada jidgooyada u leedahay dadka musaafuriinta ah mana u malaynayo in ay dib u soo noqon doonto isbaaro dambe, waxaana Leeyahay Ciidankeenna geesiyaasha ah waa bilaabataye hala baab’iyo isbaarada iyo Argagixisada nooc walbeey tahay.